विज्ञ भन्छन् : लकडाउन हट्यो तर जोखिम घटेको छैन, परीक्षण अझै बढाऔं – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/विज्ञ भन्छन् : लकडाउन हट्यो तर जोखिम घटेको छैन, परीक्षण अझै बढाऔं
विज्ञ भन्छन् : लकडाउन हट्यो तर जोखिम घटेको छैन, परीक्षण अझै बढाऔं
काठमाडौं : गत चैत ११ गते दुई एकजना सक्रिय केश हुँदा लकडाउन घोषणा गरेको सरकारले त्यसको चार महिनापछि पाँच हजार सक्रिय कोरोना भाइरस ( कोभिड-१९) का संक्रमित हुँदा खुल्ला गरेको छ।
लकडाउन खुल्ला गरिएसँगै मानिसहरु घर बाहिर निस्कने गर्दा सामान्य अवस्थामा जस्तै भिडभाड बढ्न थालेको छ। सरकारले पनि लामो दूरीको यातायत, विद्यालय, मनोरञ्जनस्थल आदि खोल्ने अझै निर्णय गरेको छैन। पार्टी प्यालेस, होटल, रेस्टुरेन्ट साउन १५ गतेबाट खुल्नेछन्।
सरकारले लकडाउन हटाएपछि संकट टरेको भन्दै मानिसहरु जथाभावी बाहिर निस्किरहेका छन्। तर यही मानिसको भिडले कोरोनाले गम्भीर मोड लिने जोखिम बढेको छ।
केही समयअघि धेरै संक्रमित भेटिएको बारामा ४६ जना नयाँ संक्रमित भेटिए। जहाँ ९ जना जनप्रतिनिधिलाई पनि संक्रमण पुष्टि भयो। वीरगञ्जमा बिहीबार मात्रै थप १६ जना कोरोना संक्रमित फेला परेका छन्।
नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा कोरोना पोजेटिभ देखिएकाहरू २ जना डाक्टर, ८ जना बिरामी, ३ जना ड्राइपोर्टका कर्मचारी, एकजना विद्यार्थी रहेको खुलेको छ। यसले नेपालमा अझै पनि कोरोनाको जोखिम नघटेको पुष्टि हुन्छ। कोरोना संक्रमण अझै पनि समुदायस्तरमा रहेको यसले देखाएको छ।
बिना कुनै तयारी सरकारले लकडाउन हतारमा खोलेकाले जोखिम बढेको विज्ञहरु बताउँछन्। यसले अझै जोखिम बढाउने उनीहरुको भनाइ छ। इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले सरकारले लकडाउन खुल्ला गर्नु स्वाभाविक भए पनि पूर्व तयारी नगर्नु सबैभन्दा खतरनाक भएको बताए। यसले कोरोनाले डरलाग्दो रुप लिन सक्ने अवस्था रहेको पनि उनको भनाइ छ।
‘लकडाउन खोलिएपछि लामो समय घरभित्र बसेका मानिसहरु एक्कासि आफ्नो पेशा व्यवसायमा फर्किँदा जोखिम बढ्न सक्छ’, उनले भने, ‘त्यस्ता व्यक्तिहरुमा कसरी निगरानी गर्ने, उनीहरुलाई कस्ता कस्ता मापदण्ड अपनाउन लगाउने जस्ता कुरामा तयारी नगर्दै सरकारले लकडाउन खुल्ला गर्दा जोखिम देखिन्छ।’
लकडाउनले कोरोना नियन्त्रणमा काम गरे पनि अब अझै जोगिनुपर्ने उनको मत छ। ‘लामो समयको लकडाउनले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा धेरै राम्रो गरेको छ’, उनले भने, ‘तर लामो समय घरभित्र थुनिएका मानिसहरु आफ्नो पेशा व्यवसायमा आउँदा जोखिम धेरै हुनसक्छ। यसमा चाहिँ सरकारले राम्रो तयारी गर्नु पर्ने थियो।’
जोखिम नघटेको बेलामा सरकारले पूर्व तयारबिना लकडाउन खुकुलो बनाउँदा पुन: संक्रमण झनै फैलिने सक्ने भएकाले अब केही समय पिसिआर परीक्षणलाई बढाउनुपर्ने मरासिनी बताउँछन्। ‘केही ठाँउमा अझै संक्रमण देखिएको छ। त्यस्ता ठाँउबाट बाहिर आवज जावत गर्ने र भिडभाड धेरै हुने ठाउँमा परीक्षणको दायरा अलि बढाउनु पर्छ’, उनले भने।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका विशेषज्ञ डा. अनुप बाँस्तोलाले अब सार्वजनिक यातायत तथा भिडभाड हुने ठाउँमा सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना भए नभएकोमा झनै निगरानी बढाउनु पर्ने बताएका छन्।
‘कोरोना संक्रमणको जोखिम टरेको छैन। लकडाउन खुलेपछि संक्रमण फैलिएका देश धेरै छन्’, उनले भने, ‘नेपालमा पनि झनै सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। जनताले आफैं सजग हुनुपर्ने समय यही नै हो।’
बाँस्तोलाले उपत्यकाबाट बाहिर जाने र आउनेलाई अनिवार्य क्‍वारेन्टाइनमा राख्‍न सुझाव दिए। ‘अब उपत्यका बाहिरबाट उपत्यकामा आएका र यहाँबाट बाहिरिएकालाई क्‍वारेन्टाइनमा राखे नराखेको निगरानी हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘उनीहरुलाई १४ दिनसम्म होम क्‍वारेन्टाइनमा राख्‍ने गरी सरकारले अनुगमन संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ।’